Afartaan Waxyaabood Sameey Marka Aad Hurdi Weysid Habeenkii | Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Afartaan Waxyaabood Sameey Marka Aad Hurdi Weysid Habeenkii
Hurdo la’aanta waa dhibaato xoogan, waxan idiin soo gudbineynaa afar waxyaabood oo ku caawinaya marka aad weysid hurdada ama ay dhib kugu noqoto inaad hurudid.
Iska ilaali Telefishinka iyo moobilka
Daawashada telefishinka ama isticmaalka taleefanka xilliga dambe waa sababta ay kuugu adkaaneyso inaad hurudid marka aad tagtid sariirta.
Waxaad isweydiineysaa, maxaa ka qaldan daawashada telefishinka ama isticmaalka moobilka?
Hagaag, waxaad daawaneysaa wararka ama waxa markaas dhacaya ayaad la soctaa, maskaxdaada ayaad shaqo galineysaa markaas oo ay maskaxda bilaabeyso ka shaqeynta waxa markaas dhacaya ama aad daawatay ama aad maqashay sababtaas darteed waxaa kugu adkaanaya hurdada, marka ka fogoow.
Iska ilaali wal wal
Hurdo la’aanta waa jahwareer, hadaba waxyaabaha ugu badan ee keena ayaa waxaa kamkid ah walwalka qofka markaas heysta ama buuq ku furan, marka waxaad naftaada ka ilaalisaa wal walka caafimaad ahaan kuuma wanaagsana wax walbo si fudud u qaado oo maskaxdaada ka saar waxa ku dhibaya.
Cunno badan ha cunin inta aadan seexan
Hadaad aad qorsheyneysid inaad seexatid ama waqtigaagii jiifka la gaaray iska ilaali inaad cunto cunno badan maxaa yeelay waa raaxo la’aan qofka culeys ayay u keeneysaa.
Cunnada badan ayaa waxa ay sidoo kale qaadataa waqti badan in qofka dheefshiidkiisa ay ku marto,halkaas oo culeyska uu ka yimaado, markaasna ma hurdi kartid sidaa darted ha iska badin cunnada kahor inta aadan seexan.
Quraan iska daaro
Marka uu quraanka kuu shidanyahay wuxuu kaa caawinayaa hurdo la’aanta, sababtoo ah niyadda iyo nafta intaba way ku raaxeystaan, waxaa kuu dagaya qalbiga marka haddii aad wajahdid hurdo la’aan shido qur’aanka kariimka ah waxaad arki doontaa neerfaha oo kuu dega iyo inaad si raaxo leh u hurudid.